Sameeyaha iyo Warshada ugu Fiican HLM Roller Mill |HongCheng
Rullalulatu toosan HLM waa qalab samaynta budo horumarsan kaas oo loogu talagalay iyadoo lagu saleynayo tignoolajiyada horumarsan ee adduunka ee Guilin Hongcheng.Warshada shiididda toosan waa qalab-shiidid gaar ah oo mideeya shiididda, qallajinta iyo kala soocidda, iyo gudbinta hal cutub.HLM taxane ah mishiinka rullaluistemadka toosan leeyahay faa'iidooyinka hufnaan shiidi sare, isticmaalka hoose, size quudinta weyn, fududaynta hagaajinta ganaax, hooseeyo kharashka hawlgalka, meel badbaadinta, qaylada hoose, xidhashada-adkeysi, ilaalinta deegaanka, iyo wixii la mid ah. Waxaa lagu dabaqaa tamarta korontada, biraha, kiimikada iyo warshadaha aan biraha ahayn, sida sibidhka portland iyo sibidhka la isku daray, limestone, slag, manganese, gypsum, dhuxusha, barayt, calcite iwm HLM warshad shiida toosan ayaa la xaqiijiyay inuu yahay qalab wax lagu shiidi karo oo badan. taas oo soo bandhigaysa faa'iidooyin badan marka loo eego shiidida kubbadda dhaqameed, sidoo kale way ka dhakhso badan tahay in la rakibo marka loo eego qalabka dhaqameed, taas oo si weyn u yaraynaysa kharashyada bilowga ah.
Haddii aad rabto inaad iibsato warshad toosan, fadlan guji LAXIRIIR HADDA hoose.
Cabbirka quudinta ugu badan:50mm
Wanaag200-325 mesh (75-44μm)
HLM Taxanaha Roller Mill Taxane (warshadaha Kiimikada)
Qaabka Dhexroor miis shiidid dhexdhexaad ah (mm) Awoodda (t/saac) Cabbirka quudinta (mm) Qoyaanka Alaabta Wanaag (10-40 μm) Qoyaanka budada u dambeeya (%) Awood (kw)
HLM21/3X 1750kii 7-27 0-35 <5% <97% ≤1 400
HLM24/2X 1900kii 7-28 0-35 <5% <97% ≤1 450
Fiiro gaar ah: Tusmada wax lagu shiido walxaha ceeriin≤18kWh/t.
HLM Roller Mill ee Sibidhka Qalafsan
Qaabka Dhexroor miis shiidid dhexdhexaad ah (mm) Awoodda (t/saac) Qoyaanka Alaabta Wanaag Awood (kw)
Fiiro gaar ah: Heerka wax lagu shiido walxaha ceeriin≤13kWh/t.
HLM Roller Mill ee toosan ee Clinker
Qaabka Dhexroor miis shiidid dhexdhexaad ah (mm) Awoodda (t/saac) Qoyaanka Alaabta Aagga dusha gaarka ah Awood (kw)
HLM24/2P 1900kii 35-45 ≤2%
Fiiro gaar ah: Heerka wax lagu shiido walxaha ceeriin≤18kWh/t.
HLM Roller Mill ee Toosan ee Slag
Fiiro gaar ah: Tusmaha wax lagu shiido alaabta ceeriin≤25kWh/t.Heerka wax lagu shiido walxaha ceeriin ≤30kWh/t.
HLM Tooska ah Mill ee Kaarboon
Qaabka Dhexroor miis shiidid dhexdhexaad ah (mm) Awoodda (t/saac) Qoyaanka Alaabta Wanaagsanaanta budada kaarboon Awood (kw)
HLM24/2M 1900kii 29-37 <15% 355/400
Fiiro gaar ah: Kaarboon hardgrove shiid index 50 ~ 70
Badeecada ugu dambeysa waxay leedahay tayo xasilloon.Waqtiga gaaban ee alaabta dhulka la dhigayo waxay xaqiijin kartaa xitaa qaabka walxaha iyo dareeraha ugu fiican.Inta yar ee ka kooban birta waa ay fududahay in la saaro si loo dammaanad qaado cadaanka sare iyo nadiifnimada.
Waxtarka shiidida sare, isticmaalka tamarta hoose.Isticmaalka korontadu waa 40% -50% ka hooseeya mishiinka kubbadda.Hal unug ayaa leh wax-soo-saar sare, waxayna isticmaali kartaa korontada dooxada.
Ilaalinta deegaanka.Nidaamka oo dhan ee rullaluistemadka toosan HLM leeyahay gariir hoose iyo qaylada hoose, waxaa la shaabadeeyey oo ku shaqeeya cadaadis taban, ma daadin boodh ah, oo asal ahaan xaqiijin kara aqoon-is-weydaarsiga-free boodhka.
Fududeynta dayactirka, hoos u dhaca kharashka hawlgalka.Roolaha wax lagu shiido waxaa laga soo saari karaa mishiinka iyada oo loo marayo qalabka hydraulic, meel weyn oo loogu talagalay dayactirka.Labada dhinac ee qolofta rullaluistu waxay u isticmaali karaan nolol shaqo oo dheer.Mashiinku wuxuu socon karaa iyada oo aan alaabta ceeriin miiska wax lagu shiidi, taas oo tirtiraysa dhibka bilawga ah.
Rollers oo leh qalabka lagu koontaroolo dhererka, kaas oo ka fogaan kara gariirka xooggan ee sababay wax yar oo miiska saaran.Qaybta xidhitaanka rullaluistemadka ee dhawaan-nakhshadeeyay waxay hubisaa xidhidh la isku halayn karo iyada oo aan la xidhin afuufiyaha, taas oo hoos u dhigi karta nuxurka ogsijiinta ee warshadda si looga hortago suurtagalnimada qarax.
Mashiinku wuxuu isku daraa burburinta, qallajinta, shiididda, kala soocida iyo gudbinta agabka hal hawlgal oo iswada oo joogto ah.Qaabaynta is haysta waxay u baahan tahay raad ka yar taas oo ah 50% warshadda kubbadda.Waxaa lagu rakibi karaa dibadda, kharashka dhismaha hoose wuxuu badbaadin karaa maalgelinta bilowga ah.
Heerka sare ee otomaatiga.Waxay qabataa nidaamka xakamaynta tooska ah ee PLC waxayna xaqiijin kartaa kontoroolka fog, fududaynta hawlgalka iyo dayactirka, badbaadinta kharashka shaqada.
waxay leedahay awood qalajin sare leh oo leh hawo kulul taabasho toos ah oo ay la leedahay walxaha ku jira shiidka, qoyaanka quudinta ugu badan ayaa ah ilaa 15%.Mashiin qallajin gaar ah iyo tamarta nidaamka shiididda waa la badbaadin karaa.Warshadaynta toosan waxay ku qancin kartaa alaabta qoyaanka kala duwan iyadoo la hagaajinayo heerkulka hawada kulul.
Sida rullaluistemadka toosan u shaqeeyo, matoorku waxa uu wadaa wax-dhiyeha si uu u wareego garaaca, alaabta ceeriin waxaa la geeyaa bartamaha garaaca qufulka hawada qufulka quudiyaha.Maaddadu waxay u guurtaa cidhifka garaaca iyadoo ay ugu wacan tahay saamaynta xoogga centrifugal iyo in ka badan in lagu dhufto xoogga rullaluistemadka oo lagu miiray tuujin, shiidi iyo gooyn.Isla mar ahaantaana, hawada kulul ayaa lagu afuufay agagaarka garaaca oo kor u qaad alaabta dhulka.Hawada kulul ayaa engejin doonta shayga sabeynaya oo dib ugu soo celin doonta garaaca.Budada khafiifka ah ayaa loo keeni doonaa kala soociyaasha, budada ganaaxa ee tayada leh ayaa ka soo bixi doonta shiidka oo waxaa qaadi doona boodhka ururiyaha, halka budada aan qallafsanayn ay hoos ugu dhacayso garaaca daabkii kalastaha oo haddana la shiidayo.Wareeggani waa habka oo dhan ee shiididda.
Qalabka rullaluistemadka tooska ah ee HLM iyadoo la adeegsanayo cutubyada caadiga ah si loo naqshadeeyo loona sameeyo aaladda cadaadiska.Marka ay kordho awoodda, tirooyinka rullaluistemadka ayaa kordhin doona (waxaan isticmaali karnaa 2, 3 ama 4, ugu badnaan 6 rollers) ee ku habboon iyo isku dhafka si loo dejiyo qalabyo taxane ah oo kala duwan oo leh awoodo kala duwan qaybaha ugu yar ee caadiga ah si loo buuxiyo shuruudaha alaabta kala duwan, ganaax iyo wax soo saar.
Nidaamka Ururinta Siigada Gaarka ah I
Habka ururinta boodhka kali ah II
Nidaamka ururinta siigada labaad